အလုပ်မြန်မြန်ပြီးချင်ပါသလား – Gentleman Magazine
အလုပ်ချိန် အပြည့်ထဲမှာ စာတွေ ရေးသေးတယ်၊ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ အချိန်ရှိတယ်၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဟင်းချက်စားနိုင်တယ်၊ ချစ်သူနဲ့ ပျော်ပျော်နေနိုင်တယ်၊ သူ့ခွေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်နိုင်သေးတယ်၊ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်တောင် စာရင်းပေးထားသေးတယ်။ အဲလိုလူမျိုး တစ်ယောက်ယောက်ကို သိကြမှာပါ။ သူတို့လဲ တစ်နေ့ကို ၂၄ နာရီပဲရတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အလုပ်အများကြီး လုပ်နိုင်နေရတာလဲ။
သင့်မှာလဲ အဲဒိလို လုပ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အဲဒိ အလုပ်အများကြီးလုပ်နိုင်သူတွေရဲ့ အမူအကျင့်အတိုင်း လိုက်လုပ်ခြင်းပါ။ အဲဒါတွေကတော့
သင် ဘာလုပ်လုပ် အဲဒိအလုပ်ထဲ စိတ် နှစ်ထားပါ။ အိုလံပစ်က ပြေးခုန်ပစ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ လူမဆန်တဲ့ အမြန်နှုန်းတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေသူတွေကို တွေ့ဖူးမှာပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ ရဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ ၁၀၀ရာနှုန်း စိတ်နှစ်ထပြီး စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သင် စိတ်လွင့်သွားပြီဆိုတာ သိတာနဲ့ အာရုံပြန် စူးစိုက်လိုက်ပါ။
၂. တစ်ချိန်ထဲ အများကြီးမလုပ်ပါနဲ့
အလုပ်မှာ ပရောဂျက်တစ်ခုကိုလုပ်နေရင်း အီးမေးလ် စစ်တာ၊ FB သုံးနေတာ၊ Chat နေတာတွေဟာ ခုခေတ်မှာ ပုံမှန်လိုကို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လူ့စိတ်က အဲ့လိုလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ချထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်အများကြီး တစ်ချိန်ထဲလုပ်ရင် အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့သွားပြီး အမှားများကာ အလုပ်လုပ်ရာမှာ ပိုကြာတတ်ပါတယ်။
အာရုံစူးစိုက်ထားနိုင်ဖို့ အနှောင့်အယှက်တွေ အကုန် ပိတ်ထားပါ။ သင့်ဖုန်းကို အံဆွဲထဲထည့်ထားပါ။
သင်ဟာ အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။ လုံးဝစိတ်နှစ်ထားနိုင်ပြီး အလုပ်ဟာ အလင်းအလျင်နဲ့ ပြီးမြောက်နေပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ ဘေးခုံက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က ” သူငယ်ချင်း၊ ဒီစာရင်းလေး တစ်ချက်လောက် ကြည့်ပေးပါကွာ”။ ရပါတယ် တစ်မိနစ်တောင်မကြာပါဘူး။ ပြသနာမရှိပါဘူး ထင်နေပါသလား။
ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ အဲဒိ အနှောင့်အယှက်လေးဟာ သင့်ရဲ့စိတ်အာရုံ စူးစိုက်မှုကို လျော့ကျစေပြီး သင်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ ပြန်ရောက်ဖို့ ၂၃ မိနစ် လိုပါတယ်။ အဲဒါဟာ CEO တွေ တံခါးပါတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါ။
၄. တခြား အလုပ်အများကြီးလုပ်နိုင်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံပါ
တကယ်လို့ သင်က အခန်းထဲမှာ အတော်ဆုံးလူ ဖြစ်နေရင် အခန်းမှားနေပါပြီ တဲ့။ အောင်မြင်မှုကလဲ အဲလိုမျိုးပါ။ သင်ဟာ အောင်မြင်တဲ့၊ စွမ်းအားပြည့်ဝနေပြီး စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ တူတူနေရရင် သင်လဲ သူတိုိ့လို ဖြစ်လာမှာပါ။ သင့်ကို ခွန်အားဖြည့်မပေးနိုင်တဲ့ သူတွေကို သင့်ရဲ့ဘဝထဲကနေ ထုတ်လိုက်ပါ။ လုံးဝ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်အချိန်တွေကို သင့်ထက်တော်တဲ့သူတွေနဲ့ တူတူနေရင်း အဓိကအသုံးချပါ။
၅. ခံစားမှုတွေ အုံကြွမလာပါစေနဲ့
သင်ဟာ မကောင်းတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးတွေကို လှောင်ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေဟာ တစ်ချိန်မှာ သင့်ကို ပြန်ပြီး လွှမ်းမိုးသွားမှာပါ။ အဲဒိလို အလွှမ်းမိုးခံရရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီး အလုပ်မလုပ်ပဲ အရက်သောက်တတ်တယ်။ အောင်မြင်မှုကို အရမ်းထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေဟာ သူတို့ခံစားချက်ကို ထိန်းနိုင်ကြပါတယ်။ တရားထိုင်တာ၊ မှတ်တမ်းရေးတာ၊ ရင်ဖွင့်ရမယ့်သူ တစ်ယောက်ထားတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Gym မှာ လက်ဝှေ့ကျင့်တာတွေနဲ့ စိတ်အလုံးအခဲတွေကို ဖြိုခွဲပစ်တတ်ကြပါတယ်။ သင့်အတွက် အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုရှာပါ။
နောက်ဆုံးသိထားရမှာက သင်လေးစားတဲ့ အောင်မြင်သူတွေ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေဟာလဲ အကြောက်တရားနဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိတဲ့ လူတွေပါပဲ။ လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားမယ့်အစား သင့်အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းကြိုးစားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ သင်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
အလုပျခြိနျ အပွညျ့ထဲမှာ Blog ရေးသေးတယျ၊ စြေးဝယျထှကျဖို့ အခြိနျရှိတယျ၊ ကိုယျ့ဘာသာ ဟငျးခကျြစားနိုငျတယျ၊ ခဈြသူနဲ့ ပြျောပြျောနနေိုငျတယျ၊ သူ့ခှေးနဲ့ လမျးလြှောကျထှကျနိုငျသေးတယျ၊ မာရသှနျပွိုငျပှဲအတှကျတောငျ စာရငျးပေးထားသေးတယျ။ အဲလိုလူမြိုး တဈယောကျယောကျကို သိကွမှာပါ။ သူတို့လဲ တဈနကေို့ ၂၄ နာရီပဲရတာပါ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ ဘယျလိုလုပျပွီး အလုပျအမြားကွီး လုပျနိုငျနရေတာလဲ။
သငျ့မှာလဲ အဲဒိလို လုပျနိုငျဖို့ အခှငျ့အလမျး ရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ အဲဒိ အလုပျအမြားကွီးလုပျနိုငျသူတှရေဲ့ အမူအကငျြ့အတိုငျး လိုကျလုပျခွငျးပါ။ အဲဒါတှကေတော့
သငျ ဘာလုပျလုပျ အဲဒိအလုပျထဲ စိတျ နှဈထားပါ။ အိုလံပဈက ပွေးခုနျပဈ ပွိုငျပှဲတှမှော လူမဆနျတဲ့ အမွနျနှုနျးတှနေဲ့ လှုပျရှားနသေူတှကေို တှဖေူ့းမှာပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ ရဲ့အလုပျအပျေါမှာ ၁၀၀ရာနှုနျး စိတျနှဈထပွီး စိတျပြံ့လှငျ့ခွငျး မရှိပါဘူး။ သငျ စိတျလှငျ့သှားပွီဆိုတာ သိတာနဲ့ အာရုံပွနျ စူးစိုကျလိုကျပါ။
၂. တဈခြိနျထဲ အမြားကွီးမလုပျပါနဲ့
အလုပျမှာ ပရောဂကျြတဈခုကိုလုပျနရေငျး အီးမေးလျ စဈတာ၊ FB သုံးနတော၊ Chat နတောတှဟော ခုခတျေမှာ ပုံမှနျလိုကို ဖွဈနပေါပွီ။ ဒါပမေယျ့ လူ့စိတျက အဲ့လိုလုပျဖို့ အစီအစဉျခထြားတာ မဟုတျပါဘူး။ အလုပျအမြားကွီး တဈခြိနျထဲလုပျရငျ အာရုံစူးစိုကျမှု လြော့သှားပွီး အမှားမြားကာ အလုပျလုပျရာမှာ ပိုကွာတတျပါတယျ။
အာရုံစူးစိုကျထားနိုငျဖို့ အနှောငျ့အယှကျတှေ အကုနျ ပိတျထားပါ။ သငျ့ဖုနျးကို အံဆှဲထဲထညျ့ထားပါ။
သငျဟာ အလုပျတဈခုလုပျနပေါတယျ။ လုံးဝစိတျနှဈထားနိုငျပွီး အလုပျဟာ အလငျးအလငျြနဲ့ ပွီးမွောကျနပေါတယျ။ အဲဒိအခြိနျမှာ ဘေးခုံက လုပျဖျောကိုငျဖကျက ” သူငယျခငျြး၊ ဒီစာရငျးလေး တဈခကျြလောကျ ကွညျ့ပေးပါကှာ”။ ရပါတယျ တဈမိနဈတောငျမကွာပါဘူး။ ပွသနာမရှိပါဘူး ထငျနပေါသလား။
ကံဆိုးစှာနဲ့ပဲ အဲဒိ အနှောငျ့အယှကျလေးဟာ သငျ့ရဲ့စိတျအာရုံ စူးစိုကျမှုကို လြော့ကစြပွေီး သငျအရငျလုပျခဲ့တဲ့ အခွအေနေ ပွနျရောကျဖို့ ၂၃ မိနဈ လိုပါတယျ။ အဲဒါဟာ CEO တှေ တံခါးပါတဲ့ ကိုယျပိုငျအခနျးလေးနဲ့ အလုပျလုပျရတဲ့ အကွောငျးရငျးပါ။
၄. တခွား အလုပျအမြားကွီးလုပျနိုငျသူတှနေဲ့ ဆကျဆံပါ
တကယျလို့ သငျက အခနျးထဲမှာ အတျောဆုံးလူ ဖွဈနရေငျ အခနျးမှားနပေါပွီ တဲ့။ အောငျမွငျမှုကလဲ အဲလိုမြိုးပါ။ သငျဟာ အောငျမွငျတဲ့၊ စှမျးအားပွညျ့ဝနပွေီး စိတျရငျးကောငျးတဲ့ သူတှနေဲ့ တူတူနရေရငျ သငျလဲ သူတို့လို ဖွဈလာမှာပါ။ သငျ့ကို ခှနျအားဖွညျ့မပေးနိုငျတဲ့ သူတှကေို သငျ့ရဲ့ဘဝထဲကနေ ထုတျလိုကျပါ။ လုံးဝ အဆကျအသှယျ ဖွတျခိုငျးတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့အခြိနျတှကေို သငျ့ထကျတျောတဲ့သူတှနေဲ့ တူတူနရေငျး အဓိကအသုံးခပြါ။
၅. ခံစားမှုတှေ အုံကွှမလာပါစနေဲ့
သငျဟာ မကောငျးတဲ့ ခံစားခကျြတှေ၊ အတှေးတှကေို လှောငျပိတျထားမယျဆိုရငျ အဲဒါတှဟော တဈခြိနျမှာ သငျ့ကို ပွနျပွီး လှမျးမိုးသှားမှာပါ။ အဲဒိလို အလှမျးမိုးခံရရငျ ဘာဖွဈဖွဈဆိုပွီး အလုပျမလုပျပဲ အရကျသောကျတတျတယျ။ အောငျမွငျမှုကို အရမျးထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
အလုပျလုပျနိုငျသူတှဟော သူတို့ခံစားခကျြကို ထိနျးနိုငျကွပါတယျ။ တရားထိုငျတာ၊ မှတျတမျးရေးတာ၊ ရငျဖှငျ့ရမယျ့သူ တဈယောကျထားတာ၊ ဒါမှမဟုတျ Gym မှာ လကျဝှကေ့ငျြ့တာတှနေဲ့ စိတျအလုံးအခဲတှကေို ဖွိုခှဲပဈတတျကွပါတယျ။ သငျ့အတှကျ အဆငျပွမေယျ့ နညျးလမျးတဈခုရှာပါ။
နောကျဆုံးသိထားရမှာက သငျလေးစားတဲ့ အောငျမွငျသူတှေ၊ အလုပျလုပျနိုငျသူတှဟောလဲ အကွောကျတရားနဲ့ ခြို့ယှငျးခကျြတှေ ရှိတဲ့ လူတှပေါပဲ။ လုံးဝ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ ကွိုးစားမယျ့အစား သငျ့အကောငျးဆုံး လုပျနိုငျဖို့ ရညျမှနျးကွိုးစားတာဟာ အကောငျးဆုံးပါ။ သငျအောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။
Previous: အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက် ဖောက်သည်ရှာခြင်း
Next: ကိုယ်တုံးလုံး အိပ်စက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ